SIDAAD U DARYEELI LAHAYD JILICSAN, TALOOYINKA UGU FIICAN EE BILOWGA AH - DHIRTA GUDAHA
Saintpaulia waa warshad gudaha ah oo aad u caadi ah waxaana loo yaqaannaa magaca Kiristaanka Baroque. In ka badan 32 kun oo nooc oo dhirtaas jira ayaa maanta jira. Laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee aad u iibsato muqusar, su'aasha markiiba waa soo baxdaa: "Sidee si habboon u daryeeli kartaa?"
Doorashada meesha ugu fiican ee Saintpaulia
Dhibaatada ugu horreysa ee kacday ka dib markii muuqaalka kore ee guriga uu ku yaallo waa doorashada xaafaddeeda. Violet si fiican u koraa meel quruxsan iyada oo aan qorraxda tooska ah iyo qoraalada.
Haddii ay suurtagal tahay, waxaa habboon in la dhigo dhinaca bari. Xaaladdan oo kale, qorraxda subaxa ma aha mid aad u dagaalamaya waxayna ka qayb qaadan doontaa ubax ka wanaagsan ee geedka.
Haddii aysan jirin wax doorasho ah, iyo xayawaanka daaqadda si joogto ah u iftiimiya iftiinka qorraxda, ka dibna si looga hortago gubashada on caleemaha jilicsan, waa lagama maarmaan madow daaqada adigoo isticmaalaya indho la 'ama dari qaro weyn.
Si kastaba ha ahaatee iftiinka aan ku filnayn wuxuu keenayaa ubax daciif ah oo geedka. Waad ku hagaajin kartaa adigoo muraayadda u wareejinaya meel khafiif ah ama isticmaalaya iftiin macmal ah. Sida walxaha iftiiminta, waxaad isticmaali kartaa nalalka dhaadheer ama phytolamp, oo ay ku jiraan 10-12 saacadood maalintii.
Rabshadaha, sida dadka, waxay dareemaan raaxo leh heer dhexdhexaad ah 18-180C. Si ubaxtu u noqoto mid caan ah, dheriga waa in loo rogaa waqti ka waqti qorraxyada dhinacyo kala duwan.
Sida loo doorto dhejis loogu talagalay ciladaha
Dooro dhar si aad uhesho, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato baaxadda iyo wax soo saarka. Xajmiga, dheriyada for violets ayaa u qaybsan yar (dhexroorka iyo dhererka 5 cm.), Dhexdhexaad (7 × 7) iyo weyn (9 × 9). Laguma talinayo in la beero saintpaulia ee dheryaha aad u ballaaransababtoo ah: marka hore, uma muuqato in si fiican loo jecel yahay, iyo marka labaad, waxaan rabnaa inaan helno ubax, ma ahan baadiyaha leh caleemo.
Waa muhiim! In violets siriyal waaweyn oo aan barbaro ilaa laba sano ah.
Rootiyooyinka jilicsan ayaa had iyo jeer u dhow dusha sare. Tani waxay keenaysaa hawo wanaagsan iyo nuugista nafaqada fudud ee nidaamka xididka.
Haddii aad gaadhay 9 × 9 dhir, ka dibna habka transplanting waa in lagu sameeyaa dheriga isku mid ah. Ruxda hoose ee qaybta saddexaad ee dhulka, dhirta dheri, ku dar dhulka intiisa badan. Wixii biqilka ee xididdada cusub, meel ayaa la sameeyey, tan iyo xididdada caleemaha koraayo sare iyo hooseeyo si tartiib tartiib ah u dhintaan.
Dharafadu waxay noqon kartaa caag ama dhoobo. Balaastikada - nalalka, raqiis, rogrogmi karo, adkaysi leh, laakiin si xun u neefsan kara. Si loo baabi'iyo dhibcahan, waxaa lagu sameeyaa saxaarad gaar ah.
Waxay leedahay dusha maskaxda oo kuu ogolaaneysa inaad ku hayso hoose ee dheriga meel sare. Tani waxay keenaysaa socodka hawada si xididdada geedka.
Dhirta cagaarka ah waxay la timaadaa ama aan lahayn baraf. Noocyada sharraxa leh waxay isku mid u yihiin balaastig, inkastoo ay qurux badan yihiin, laakiin qiimaha ay ku haboonaan doonaan.
Xirmooyinka lakala jarjaray ayaa ah dheelitir la'aan, culus iyo muddo gaaban, laakiin ciladaha ku jira iyaga ayaa dareema. Dhibaatada 'esteretic' ayaa laga tirtiri karaa adigoo iibsanaya dheriyo ama dhar qurux badan oo cabbir ka yar. Ku rakibida dhirta dheriga dheriga.
Shuruudaha loogu talagalay ciidda korriinka koraya ee guriga
Xayawaanka loogu talagalay violet, sida caadiga ah, waxaa laga iibsan karaa dukaanka ubaxa, laakiin beeraha qaar ka door bidaan in ay karsato, iyaga oo ka fikiraya iibka aad u fudud. Marka hore, dheecaan ayaa lagu rakibay qaybta saddexaad ee dheriga (dhuxusha, dhoobo dhoobo, qaybo yar oo leben ah).
Carrabku waa inuu noqdaa iftiin, nafaqo iyo neefsasho. Qeybaha nafaqo ee carrada ee carrada waxaa ka mid ah: humus caleen, dhul sodan, compost, digirta la gooyey, biohumus, iyo fudaydka ciidda iyo hawo-galinta noocan oo kale ah waxaa loo isticmaalaa sida peat, humus baaxad leh, carrada cagaaran ee cagaarka ah, boodhka peat, moos sphagnum.
Sidoo kale, cirbadaha carrada waxaa badanaa loo isticmaalaa: ciid, perlite, vermiculite.
Ma taqaanaa? Violet waxay ka caawisay helitaanka miino weyn oo Yurub ah. On dhulalka ku hodan ee Zinc, koraan ubaxyada ugu weyn ee violets.
Noocyada waraabinta iyo buufinta
Waraabinta saintpaulia waxay leedahay meel gaar ah oo daryeelka ah iyo beerista dhirta. Ma jeclaanayo waraabinta xad dhaafka ah iyo ciidda qalalan. Sidaa daraadeed, biyo dhowr maalmood ah kuna hay carrada qoyan.
Waraabinta waa in la kala soocaa ama la kariyaa biyo heerkulka qolka. Wixii cabitaan, adeegso biyo waraaq dheer oo dhuuban, sababtoo ah jilic ma jecla biyaha inay ku dhacaan caleemaha ama barta koritaanka ee bartamaha baadiyaha.
Qeybta hoose ee dheriga, waa in uu jiraa dalool kaas oo inta ka hartay biyaha. Saacad ka dib markaad waraabiso, biyaha dheeraadka ah waa in la miiro. Haddii biyuhu ku soo baxaan caleemaha, waa in aad ku tirtirtaa maro.
Waxaad ku waraabin kartaa cirridka iyo surwaalka. Ku shub weel weelka oo sug ilaa nus saac. Violet waxay qaadan doontaa qiyaasta loo baahan yahay qoyaanka. Daadi biyaha xad-dhaafka ah.
Caleemaha geedka ma aha mid aad u baqaya biyaha, sida horumarinta bakteeriyada iyo kalluunka fungal, iyo biyaha oo kaliya waxay kudeeqdaan geedi socodkan. Sidaa darteed, ma yeeli kartid caleemaha geedka, laakin waad ku nadiifin kartaa hawada, tusaale ahaan, inaad ku riixdo hawada agagaarka geedka ama adigoo isticmaalaya shukumaan qoyan oo ku jira batari kulul.
Violets waxay doorbidaan hawo qoyan leh qoyaan qaraabo ah oo ah 50-60%.
Goorta iyo sida loo quudiyo cayayaanka
Wixii koritaan caadi ah iyo ubax, waxaad u baahan tahay daryeel habboon oo ku saabsan violets iyo tiro ku filan oo ah qaybaha yaryar iyo macro. Macronutrients waaweyn waa nitrogen, fosfooraska iyo potassium. Dhammaantood waa inay ku jiraan qaddarka loo baahan yahay, sababtoo ah inta badan ama yaraanta waxay keenaysaa hoos u dhac ubax, hurdi iyo dhimasho caleemaha.
Tilmaamayaasha xitaa waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaraan koritaanka dhirta. Kuwaas waxaa ka mid ah birta, manganese, cobalt, molybdenum, zinc, copper, boron. Doorka ay ku leeyihiin nolosha dhirta waa in la hubiyo soo saarida istiraatiijiyada ee suurtogalka ah in ay si firfircoon u isticmaalaan tamarta qoraxda, biyaha iyo nafaqooyinka ku jira ciidda.
Vitamiin iyo asiidhyada amino waxay kiciyaan kor u kaca rootiyada geedka iyo macro-yada.
Rabshadaha waa in la bacrimiyaa mar kasta 10-14 maalmood oo ay ku jirto bacrimin for violets ama bacriminta guud oo la isticmaalayo habka dharka xididka. Akhri tilmaamaha bacriminta iyo diyaarinta xalka si aad u waraabiso. Waxaan bacrimineynaa si isku mid ah sida waraabinta joogtada ah kadib marka la raaco tilmaamaha.
Waa muhiim! Bacriminta kala duwan waxay leeyihiin xoogag kala duwan. Sidaa darteed, hubi inaad akhrido tilmaamaha oo aad raacdo qiyaasta daawada. Violets aad u liidata dulqaadka badan ee Bacriminta.
Waxaa ka wanaagsan inaad haysatid dhawr nooc oo Bacriminta ah oo aad u beddesho waqti ka waqti. Tusaale ahaan, kobcin aad u ballaaran, bacriminta guud waa ugu habboon dhirta ubaxa dhirta oo leh waxyaabo dheellitiran oo nitrogen ah, iyo ubaxyada jilicsan iyo daryeelka iyaga - bacriminta gaarka ah ee saintpaulia, oo leh heer sare oo ah fosfooraska iyo potassium.
Waa in la xusuusnaado in cayayaanka bacrimin ah waa in aanay noqonin xaaladaha noocaas ah:
bil gudaheed ka dib marka lagu tallaalo;
oo leh xoog u daciif ah ee warshadda by cayayaanka ama cudurada;
oo leh koror xoog leh ama hoos udhaca heerkulka hawada.
Sida loo baadho baadiyaha
Inta badan su'aasha ayaa soo baxaysa: "Sidee loo ilaaliyaa jilayaasha gurigooda?" Si aad u hesho warshad qurxoon oo qurux badan. First of dhan, waa in la xusuusnaado in rosette of a violet waa in ay u egtahay dhexdhexaad ah, quruxsan oo ka kooban saddex saf oo caleemo ah.
Xarunta koritaanka iyo horumarinta cayayaanka waa in aysan aheyn caleenta caleenta ah. Tani waxay sabab u tahay la'aanta waxyaabaha muhiimka ah ee horumarinta caleemaha cusub, waxayna noqdaan kuwa yaryar.
Haddii ay taasi kugu dhacdo, si fudud uga saari caleemaha hoose ee u muuqda midab jaalle ah oo aan caadi ahayn. Way fududahay in ay kala soocaan asliga ah, kaliya ku cadaadi farta ku taal saldhiga, ka dibna ku xoqo dhamaan caleemaha aan loo baahnayn ee mooska.
Haddii caleemaha, ay sabab u tahay ficilada noocan oo kale ah, jirridda caanaha, ka dibna waxay sii deyn kartaa ama ku ridi kartaa dhulka. Si uu baadiyaha u noqdo simmetrical, waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah u jeediyaan iftiinka dhinacyo kala duwan.
Sharciyada taranta Saintpaulia
Habka ugu fudud iyo habka ugu caamsan ee dhalmo-rogashada waa caleen fara badan oo biyo ama ciid ah. Habkan, xulashada saxda ah ee xaashida ayaa kaalin muhiim ah ka ciyaara. Waa in laga soo qaataa qaangaarka qaangaarka ee ka hooseeya barbaarinta.
Waraaqaha ka soo jeeda qulqulatooyinka taranku maaha kuwo ku habboon, sababtoo ah iyagu weli ma helin xoog iyo nafaqo ku filan. Caleen waa in aysan aheyn wax magdhow ah iyo cillado, midabka dhalaalaya oo dhalaalaya. Waraaqaha aadka u daran waxay leeyihiin nafaqooyin yar yar, sidaa daraadeed way ka fiicnaanayaan in ay qaataan.
Si taxadar leh u jajabiso caleenka la soo xulay, ka tag jarista qiyaastii afar sentimitir dhererka iyo jarjar qaybta xad-dhaafka ah ee la jarjarayo. Qalabka jarjar ilaa 15 daqiiqo.
Kala saarista caleemaha geedaha ee ku jira weel biyo ah oo soo saarey taxanaha soo socda:
Warqad kasta, diyaariso suxuunta muraayadda mugdiga leh qoorta dhuuban.
Buuxi suxuunta biyo leh ama biyo caadi ah iyada oo lagu daro dhuxul firfircoon. Tani waxay ka hortagi doontaa hannaanka cowska.
Goob jarida 1 cm biyo. Iska ilaali qoraxda tooska ah.
Biyaha waa la daadin karaa, laakiin lama badalin.
Haddii leexdo goynta si lama filaan ah u dhacdo, u gaabi qaybta caafimaadka qabta oo budada ku dhaq. Biyaha suufka ayaa isbedelaya. Raac nidaamka sameynta xididada. Waxay socon kartaa ilaa hal bil. Iyada oo dhererka xididka ee 1-2 cm, caleen waxaa lagu beeray karaa koob balaastig ah.
Kala saarista caleemaha geedaha ee dhulka waa sida soo socota:
Diyaarso koobabka caagagga. Ka samee dalool hoose.
Seddexda hoose ee koobka, sii daadi. Isticmaal xumbo ama dhoobo dhoobo sida dheecaan. Buuxi inta kale ee dhulka ah oo leh dhul loogu talagalay gaboodfalayaasha.
Ka samee dalool meel dhexe, ku dar waxoogaa perlite ah oo isku dhafan dhulka, iyo beeritaanka jarida si qoto dheer ah 1.5 cm.
Ka dhig carrada si joogto ah qoyan oo ha qalalan.
Qaababka kale ee taranku waa kuwo aad u adag oo leh boqolkiiba wax yar oo natiijo fiican ah.
Tusaale ahaan chimeras Waxay ku dhalinayaan kicinta sameynta tallaabooyinka, iyo marka ay ku dhuftaan caleen, midabkooda ayaa lumay. Guntada dhirta, inta badan waxay u muuqataa sababtoo ah content nitrogen sare ee ciidda. Waa la kiciyaa xajmiga ilmaha, si taxadar lehna uga gooyo hooyada.
Kufsiga kobcinta ayaa lagu qaboojin karaa aqalka dhirta lagu koriyo, isaga oo ku dhejinaya xayawaanka sphagnum. Geedi socodka oo dhan wuxuu qaataa laba bilood. Natiijo ahaan, waxaad heleysaa warshad caadi ah oo kala duwan. Xakameynta tallaabooyinka ku jira cuuryaanka-chimeras ayaa lagu fulin karaa iyadoo la jarayo kore.
Noocyada jilicsan ee cagaarsho ama miraha waxaa lagu sameeyaa oo keliya jajab.
Ma taqaanaa?Roomaankii qadiimka ahaa ee loo yaqaan 'violet' ubaxa ah ee Jupiter.
Isku-Duubka Qalitaanka Qalitaanka
Qalabka sannadlaha ah ee violets wuxuu kiciyaa ubaxyada dhirta wuxuuna ka dhigayaa suurtogalnimada in la yareeyo qaybta hoose ee asliga ah. Daryeelka ugu fiican ee violets guga waa ay ku tallaalaan. Waxaa la samayn karaa wakhti kasta, laakiin ma aha inta lagu jiro xilliga ubax. Caleemaha ubaxu waa la wareegayaa haddii ay dhacdo xaalad deg-deg ah, ka dibna kaliya si loo badbaadiyo warshadda.
Transplantation waxaa lagu sameyn karaa mid ka mid ah siyaabaha: iyadoo lagu bedelayo dhamaystirka ciidda, badalida qaybta ciidda, habka isugeynta.
Beddelidda baddalaad buuxda oo badal ah ayaa loo adeegsadaa qalqaalinta dadka waaweyn. Faa'iidada habkani waa bedelka ugu badnaa ee ciidda, iyo sidoo kale kormeerka iyo nadiifinta nidaamka xididka geedka. Ka dib markii ay ka saareen dhirta ka soo dherigii, gariirin dhulka, iyo ka saareen caleemaha hoose, peduncles, xididdada jir ah.
Qeybta hoose ee dheriga waxaan saarnaa dheecaan, ka dibna carrada qaar. Waxaan dhajineynaa dhirta bartamaha iyo dhammaan dhinacyada aynu ku seexanno ciidda caleemaha hoose. Waraabinta waxaa la sameeyaa maalinta labaad. Haddii ay dhacdo hoos u dhac, buuxi. Waxaan hubinaynaa in lugta caanku ay dhulka ku jirto.
Qalabeynta leh beddel qayb ka mid ah carrada waxaa loo sameeyaa inta badan loogu talagalay violets dhallinyaro. Qaabkan, waa inaad haysataa dher weyn. Qaadista ayaa la mid ah qaabkii hore, kaliya dhulka ayaa la ruxay oo kaliya kaliya taas oo ciriiri ah.
Transplanting by wareejinta waa ugu caansan ee warshadda. Si aad tan u samayso, qaado dheriga yar yar. Dheecaan ku shub lakabka yar ee carrada, iyo bartamaha dhigay dherigii hore.
Meelaha u dhexeeya dheryihii daboolay dhulka iyo ruxin tamp. Ka saar dherigii hore oo ku rid boome leh qalabka dhismaha ee hunqaacda. Dusha sare ee ciidda waa inay ahaataa mid siman.
Daryeelidda dhirta quruxda badan, waxaad ka heli doontaa farxad iyo mahadnaq leh qaab bangi ah oo cajiib leh oo ku yaal xayawaankaaga daaqadda.